The Good Life the Book — njem Lee - Official Site
The Good Life the Book
Dị ka ọtụtụ n'ime unu maara, M na a na-arụ ọrụ na a akwụkwọ na-aga na m Kacha ọhụrụ album, The Good Life. Ọfọn akwụkwọ a ga-ahapụ ya na Moody Publishers on October 1, 2012. -Agụ banyere ya na pịa tọhapụ n'okpuru. Na-aga TheGoodLifeTheBook.com a ga-amara gị ọkwa mgbe ọ tọhapụrụ.
Hip iwuli elu ọgụ egwu njem Lee nyak mpụta mbụ AKWỤKWỌ Ezi NDỤ na October 1, 2012 SITE Moody nkwusa
-Abịa oru ngo na-ewuli ke ugbu a na album ntọhapụ na redefines "The Good Life" ọnwụnwa site ndị mmadụ anaghịzi adị ndụ na ìhè nke ụgha ma na iba na a ọhụrụ na ndị ọzọ dị ebube njem.
Los Angeles, Calif. (Ka 17, 2012) -Billboard Chaatị-egbupụsị Hip iwuli elu artist Njem Lee na-gearing maka ya mpụta mbụ akwụkwọ ntọhapụ, The Good Life (Moody Publishers). A n'ihu ya ọhụrụ album nke wepụtara na April 10, 2012 site apụghị Iru Records, The Good Life ga-kụrụ echekwa mba on October 1, 2012.
"N'ihi na afọ, M na a na-eme music na aka ụwa anyị echiche na-ezo aka Christ – ma o nwebeghị mgbe a na-agaghị emeli na-music, n'ihi na e nwere bụ naanị nke ukwuu i nwere ike ikwurịta okwu na a song,"Na-ekwu Njem. "The album nyere ege ntị snapshots nke ezi ndụ, na akwụkwọ ga-abụ ihe dị ka a akwụkwọ ntuziaka na-esi ebi ndụ ya. M na-ekpe ekpere na akwụkwọ a ga-enyere onye na-agụ chigharia ụgha na ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ na e kere anyị ibi ndụ. "
Site na iji ihe akaebe nke ndụ ya, Njem explores ụgha na a gwara, na-enye nkọwa a ọhụrụ, Bible na foto nke ezi ndụ. Ịgagharị niile nke ndụ gụnyere obi ụtọ, ịga nke ọma, na ụkpụrụ omume na ìhè nke eziokwu Chineke The Good Life redefines okwu dị ka adịghị ebi ndụ na-amasị onwe gị ma ndụ site na okwukwe na ezi Chineke.
"The ezi ndụ na-adịghị na-arị elu n'ọkwá dị elu, ezi ndụ bụ a ndụ na ihe ọ bụla ibu ọrụ,"Na-ekwu Njem. "The ezi ndụ dị ndụ na mmekọrịta ya na Chineke na-amakụ nile O nwere na-enye anyị ka anyị na Kraịst."
Ọ dịghị ọhụrụ ahụ bịaranụ aka Christian music idaha, Njem si mpụta mbụ album, Ọ bụrụ na ha maara, kụrụ echekwa mba a ụbọchị ole na ole mgbe ya n'ụlọ akwụkwọ dị elu ngụsị akwụkwọ. N'otu afọ, ọ nọkwa na-agba na nduru Onyinye-nominated, -adịghị agafe agafe classic "Jesus müzik" na labeelu mate Lecrae. Njem si sophomore album,20/20, e wepụtara na 2008 na garnered ihe ịga nke ọma: -agbasa n'ime German Top 200, -eru #11 na German Christian albums chaatị na ọdịda na #4 na Gospel chaatị. Na atọ ya studio album, N'etiti Ụwa Abụọ, Njem awa a collection of reflections na ndụ a dara n'ụwa. Ndị reflections resonated na-ege ntị ka B2W debuted na #1 na Christian na Gospel German chaatị dị iche iche, #5 na Hip Hop / RAP iTunes chaatị na #9 na Top Albums iTunes chaatị. The album natakwara abụọ nduru Nhoputa na a stellar Award maka Best Gospel RAP / Hip Hop Album n'Afọ.
Njem si ọhụrụ album ntọhapụ, The Good Life debuted na #2 ma na mkpokọta na Hip Hop iTunes chaatị dị iche iche mgbe garnering na #3 ọnọdụ na German si Hip Hop chaatị, ọdịda na #17 na Top 200 German chaatị na-ewere #1 oghere na Christian na Gospel German chaatị.
Njem ka njem ụwa n'ịrụ ọtụtụ puku ndị gere. Na njikọ na The Good Life, Njem bụ ugbu a na a nkwado mba tour na a ga-a na-apụta artist na dị iche iche 2012 ememme gụnyere Mmụọ West Coast, Atlanta Fest na Rock The Lakes, n'etiti ndị ọzọ.
Banyere Moody Publishers
N'ihi na ihe karịrị 115 afọ, Moody Publishers bipụtala pụrụ ịtụkwasị obi, substantive ihe onwunwe na-elekwasị anya na ihe kasị mkpa ná ndụ. Ha ka na-izute mkpa nke a na-eto eto na-agbanwe agbanwe n'ọma ahịa na na ngwaahịa nke kasị mma, site omenala akwụkwọ e biri ebi, site ọdịyo na video ngwaahịa, na now site e-akwụkwọ maka họrọ electronic na-agụ akwụkwọ. Maka ozi ọzọ, biko gaa na http://www.moodypublishers.com/.
Banyere apụghị Iru Records na ReachLife Ministries
Iru Records na ReachLife Ministries-agbalịsi ike, "Imeri ọdịiche dị n'etiti Baịbụl eziokwu na obodo mepere emepe na-ekwu." Tọrọ ntọala na 2003, Apụghị iru Records bụ a Christian music ndekọ labeelu raara nye eji music dị ka n'ọnụ eru ndị mepere emepe na obodo a Bible ụda ụzọ. Mgbe Metụtaruru Records mîdaha music ikpughe Baịbụl eziokwu, ReachLife Ministries Aims-ike ka ozi ndi-isi na nke a music iji na-eto nke bi n'obodo ukwu na chọọchị.
N'ihi na ihe ọmụma na a ndepụta nke na-abịa apụghị Iru Records na ReachLife Ministries ihe, biko gaa na http://reachrecords.com. Maka ozi ọzọ banyere ReachLife biko gaa na http://reachlife.org/.
Sabahspsalm777 • August 19, 2013 na 8:51 Abụ • zaghachi
Peace nwanne ezinụlọ anyị dum na-enwe ekele gị nkà na otú Jehova na-eji gị. Ọ dịghị iwe ma ụfọdụ na obodo nke ndị kwere ekwe nụrụ asịrị na ị bụ onye a “Mason” na ala na Illuminati. Ana m adịghị anwa agbasa negativity, dị nnọọ ga-adị ma ọ bụrụ na i nwere ike ilebara a. N'ebe anyị nọ ndụ e na-ukwuu ịkwa iko ime mmụọ na-aga na Kraịst ụgha na-eduhie ndị mmadụ, ị pụrụ biko mee ka a na nkwupụta otú ndị mmadụ nwere ike ịmata ihe bụ elu. Ụfọdụ n'ime gị labeelu na nwunye ka ihe a ga-egbu maramara Masonic akara on e videos. M bịara Jehova mgbe afọ n'anwansi na mara na a otutu ihe na chọọchị bụ Setan. i si ghara ịghọta na site na gị, ma, anyị ka kwesịrị ịbụ free aghụghọ. Biko na-enweghị iwe a na-abịa site n'ebe nke ịhụnanya na nchegbu.
Sister na Christ
Michael gbazere • August 19, 2013 na 8:52 Abụ • zaghachi
Awesome! Ị kwesịrị ị na-apụta gaa Moody Bible Institute – Spokane maka a tọhapụ egwu! :)